ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ရှစ်လေးလုံး ငွေရတုကျင်းပတာ အနာဂတ်ကို ဘယ်လိုပုံဖော်မလဲဆိုတာ အဖြေရှာချင်လို့ဟု ပြော (ရုပ်သံ)
ရှစ်လေးလုံး ငွေရတုကျင်းပတာ အနာဂတ်ကို ဘယ်လိုပုံဖော်မလဲဆိုတာ အဖြေရှာချင်လို့ဟု ပြော (ရုပ်သံ)
မြန်မာပြည်မှာတရားဥပဒေအထက်မှာနေပြီး လုပ်ချင်ရာလုပ်နေကြတာတွေက လျော.သွားတာက
နည်းနည်း ၊ တိုးလာတာတွေကများများ ဖြစ်နေတာတွေ.ရတယ် ။
ဒါတွေကို ဥပဒေအတိုင်းမဆောင်ရွက်နိုင်ဘဲ အားလုံး
(အားလုံး) ကလက်ပိုက်ကြည်.နေကြရရင်လည်း ဒီမိုကရေစီ
နိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို. တို.၊ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ရေးတို. ၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်ပရေးတို.
၊ ဖက်ဒရယ်မူ ကျင်.သုံးရေး တို.၊နိုင်ငံခြား လွှတ်တော်များလေ.လာရေး
တို. .......... စတဲ. အရာတွေ ပြောနေ ၊ဆိုနေ ၊
လုပ်နေကြတာက "၀" မရှိဘဲ "၀ိ" လုပ်နေသလို မြင်
" ၀ " ရှိအောင် အရင်လုပ်ကြပါ လို.ပြောချင်တယ်ဗျာ ။
ကျားကိုလည်းကြောက်ရ ၊ ကျားချေးကိုလည်း ကြောက်
ရတဲ. ခောတ်မှာ ကျား ရှိနေသရွေ. ရှေ့လမ်းစဉ်ကို ဆက်သွားလို.ရမရ တွက်ချက်သင်.တယ် ။
အနာဂါတ်ကို ပုံဖေါ်နိုင်အောင်ပါ ။
ခုထိကို ဘယ် ဘယ် ဘယ်လို နဲ့ 
ပုံ ပုံ ပုံဖော် မလဲ ဆိုတာ
ခုထိကို ဘာ ဘာ ဘာမှမသိ သေးပဲ
အဖြေရှာ နေတုန်းပဲပါ ခင်ဗျာ..ခင်ဗျ..လို့ 
ဖွင့် ဟ ကျေညာ လိုက်တာများလား။
ပြည်ပခရီး တွေထွက်ရင်း အဖြေရှာနေတာ